Laga soo bilaabo la kariyey ilaa ugaarsi: siyaabaha ugu caafimaadka badan ee loo cuno beedka | Cuntada Nutri
Laga bilaabo la kariyey ilaa la ugaarsaday: siyaabaha ugu caafimaadka badan ee loo cuno beedka
Ukunta Waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caafimaadka badan uguna dhammaystiran ee jira: mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan xagga qiimaha nafaqeynta, oo la heli karo sanadka oo dhan, raqiis ah oo kalooriyo yar. Sababtan awgeed, waxay lama huraan u tahay cuntooyinka miisaanka lumiya ama, si fudud, marka la qorsheynayo qaab kasta oo cunto caafimaad leh oo dheellitiran oo qoyska oo dhan ah.
Hadda, sida cuntooyinka badankooda, hababka karinta ukunta waxay leeyihiin wax badan oo ay ka yiraahdaan wadarta kalooriyooyinka, qaadashada dufanka, iyo haynta nafaqeynta ama saarista.
In kasta oo ay dhammaantood yihiin kuwo qurux badan, qaar ayaa kugu habboon kuwa kale. Si taxaddar leh u akhri, sababtoo ah waxaad heli doontaa wax yaab leh.
1 Sidee loo kariyaa ukunta habka ugu caafimaadka badan?
3 La kariyey
4 la ugaarsado ama la ugaarsado
5 La shiilay
6 isku tumay
Sidee loo kariyaa ukunta habka ugu caafimaadka badan?
Si ka duwan sida ay dadku u maleynayaan, Habka ugu caafimaadka badan ee loo cuno ukun maaha cayriinlaakiin la kariyey.
Taas waxaa sabab u ah in heerkulka sare uu soo saaro dhacdo loo yaqaan denaturation of borotiinnada ukunta, taas oo ka dhigaysa mid aad u dheefshiidka jirka. Sidaa darteed, ciyaartoydu waxay sameeyaan khalad cad iyagoo cunaya ukun cayriin ah, maadaama aysan gaarin saameynta la rabay.
Iyadoo taas la leeyahay, aan eegno hababka kala duwan ee caafimaadka leh ee loo kariyo ukunta. Liiskan waxaan tixgelinnay farsamooyinka ugu caansan; si kastaba ha ahaatee, tan iyo Pazo de Vilane, Beerta Isbaanishka ee ugu da'da weyn ee ukunta xorta ah ee lagu koray xorriyadda, waxay ku siinayaan xoogaa siyaabo kale oo macaan oo asal ah oo loo kariyo ukun. In ka badan 25 sano oo dhaqashada digaagga dariiqa hore ayaa ah mid aad u fog, markaa waxaan ku fiicnaan lahayn inaan ku dhaqanno qayb ka mid ah taladiisa.
Haddii aad haysato digsi fiican oo aan dhejis ahayn, kani waa kan. dhaqsiyo badan, macaan oo hab caafimaad leh oo loo cuno ukun. Ma lihid cudurdaar ah inaadan ku darin quraacdaada, sababtoo ah waxay qaadan doontaa 1 daqiiqo oo keliya inaad diyaariso.
Oo ay ku jiraan kala duwanaanshaheeda kala duwan: lagu qooyay biyo wax ka badan ama ka yar daqiiqado. Waxa wanaagsan oo ku saabsan habkan caafimaadka qaba ee ukunta loo kariyo waa taas dhowr ka hor ayaad diyaarin kartaa oo dhex geli iyaga marka aanad wakhti badan haysan. Iska jar qaar ka mid ah khudaarta darayga ah oo waxaad heli doontaa koorsada ugu horeysa ee wanaagsan; ukunta la kariyey ee dhexdhexaadka ah waxay bixisaa 64 kcal oo keliya.
la ugaarsado ama la ugaarsado
Farsamadan ukunta lagu kariyo waa mid aad moodo Thanks to ukunta Benedictine ee macaan, saxanka xiddigta ee quraacda dhadhanka leh iyo brunch. Inkasta oo maraqa hollandaise ee inta badan la socda ay leeyihiin kalooriyooyin aad u yar, dhib ma leh haddii aad waqti ka waqti qaadato oo aad ku sameyso guriga.
Si kastaba ha noqotee, ukunta la kariyey ama la kariyey laftooda ayaa macaan leh, waxaa ku jira fiitamiinno, macdano, amino acids iyo borotiinno, oo aan la naaxeynin (oo la mid ah ukun la kariyey, qiyaastii 65 kcal).
Haa, waxaad moodday in ukunta shiilan aysan caafimaad qabin… Waxaan ku siin doonnaa war wanaagsan! Waa run in habkan wax lagu kariyo ay bixiso dhowr kaloori oo dheeraad ah (qiyaastii 110), laakiin aad uma badna, waxaadna iska ilaalin doontaa qaar haddii aad si fiican u daadiso ukunta markaad ka saarayso. Sidoo kale, haddii aad ku sameyso saliid saytuun ah oo bikrad ah oo wanaagsan Ma bixin doontid dhadhan oo kaliya laakiin dhammaan sifooyinka EVOO ee aan jecelnahay.
Farsamadan cunto karinta, ha ka waaban inaad isticmaasho dhammaan male-awaalkaaga. Oo samee adoon ka shallayn oo leh cuntooyinka ugu caafimaadka badan uguna qanisan ee aad ka fikiri karto: maraqa yaanyada dabiiciga ah, boqoshaada toonta, qaar ka mid ah prawns, isbinaajka, tuna, turkiga, galleyda Laba ukun oo la tumay oo aan saliid lahayn ayaa si dirqi ah ku bixiya 149 kcal.
Omelette baradho sacrosanct ah waa in yar oo kaloori ah laakiin aad loogu talinayaa. Dhab ahaantii, haddii aad isku daydo inaad naftaada ku xakameyso qaddarka waxaad awoodid inaad ku bixiso inta jeer. Sida laga soo xigtay Mu'asasada Nafaqada ee Isbaanishka, qayb yar oo omelette baradho ah waxay yeelan kartaa qiyaastii 196 kilocalories.
Xagga tortillas-ka la cuskaday ama kuwa Faransiiska ah, dhib ma leh in lagu daro cuntadaada maalin kasta. Omelette Faransiis ah oo leh laba ukun waxay yeelan kartaa qiyaastii 154 kcal.
Sida aad arki karto, a hababka caafimaadka leh ee loo kariyo ukunta aad bay u kala duwan yihiin oo macaan yihiin. Dhab ahaantii, marka lagu daro cuntooyinka kale ee lagu taliyay waxay ku dhow yihiin kuwo aan dhammaad lahayn.
Sidaa darteed, ha iloobin inaad ku darto ukunta marka aad qorsheyneyso cuntadaada iyo tan qoyskaaga oo dhan, sababtoo ah waxaad u sameyn doontaa caafimaadkaaga wanaag... iyo jeebkaada. Faa'iido labanlaab ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Alimentos » Laga bilaabo la kariyey ilaa la ugaarsaday: siyaabaha ugu caafimaadka badan ee loo cuno beedka